‘टेलिभिजनमा चलचित्र पत्रकारिताको हामी ट्रेन्ड सेटर हौं’ : RajdhaniDaily.com
Homeकला‘टेलिभिजनमा चलचित्र पत्रकारिताको हामी ट्रेन्ड सेटर हौं’
नेपालमा डेढ वर्ष यताबाट सिनेमाको गतिविधि शून्यजस्तै भए पनि यो अवस्थामा टिभी फिल्मीले चलचित्रको गतिविधिलाई निरन्तरता दिएको छ । गोपीकृष्ण इन्टरटेनमेन्ट प्रालिको टिभी फिल्मी नेपालको पहिलो सिनेमासम्बन्धी च्यानल हो । चलचित्र पत्रकार विष्णुप्रसाद सुवेदी यो च्यानलका स्टेसन म्यानेजर हुन् । एक दशक अघि समाचार प्रमुखका रूपमा उनी यो च्यानलमा आएका थिए । नेपालमा चलचित्र समाचारलाई दैनिक बुलेटिनका रूपमा नियमित प्रस्तुत गर्ने क्रमलाई एक दशकदेखि आफूहरूले जारी राखेको स्टेसन म्यानेजर सुवेदीको कथन छ । अबको नेपाली चलचित्रको अवस्था र नेपालमा चलचित्र पत्रकारिताबारे स्टेसन म्यानेजर विष्णुप्रसाद सुवेदीसँग राजधानी दैनिकद्वारा गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालमा फिल्मी टेलिभिजन सञ्चालन गर्नुको कारण के हो ?
नेपालमा जति पनि टेलिभिजन सञ्चालनमा थिए ती सबै मूलधारको पत्रकारितामा आधारित थिए । नेपालमा फिल्म क्षेत्रको विकास भइसकेको थियो । चलचित्रकर्मी उद्योगको मान्यताको माग गरिरहेका थिए । तर, चलचित्रका गतिविधिहरू भने टेलिभिजनमा उपेक्षित थियो । तपार्इँ हामीलाई थाहा नै छ यहाँ सेलिब्रेटीको क्रेज कति धेरै छ भनेर । तर, तिनै सेलिब्रेटीका गतिविधि आम दर्शकसम्म पु-याउन कुनै माध्यम थिएनन् । अर्का तर्फ दूर दराजसम्म चलचित्र हल पुगिसकेका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा टिभी फिल्मीमार्फत चलचित्रकर्मीका गतिविधि पनि आम दर्शकमाझ पु-याउने र टिभीका माध्यमबाट चलचित्र पनि देखाउँदै आमदर्शकमा सिनेमा संस्कृतिको विकास गर्ने सोचले टिभी फिल्मी सञ्चालन गरिएको हो ।
सुरुमा तपाईँ टिभी फिल्मीसँग कुन रूपमा आवद्ध हुनुभयो ?
म २०६८ सालमा समाचार प्रमुखका रूपमा टिभी फिल्मीसँग आवद्ध भएको हुँ । त्यो समयमा चलचित्रका गतिविधि पनि बिस्तारै बढ्दै थिए । आमदर्शकलाई चलचित्र र चलचित्रकर्मीप्रति निकै चासो थियो । तर, यस्ता खबर थाहा पाउन सातादिन कुर्नुपथ्र्यो किनकि उक्त समय केही टेलिभिजनमा मात्र चलचित्रको कार्यक्रम त्यो पनि साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुन्थे । अनि सामाजिक सञ्जालको विकास पनि अहिले जस्तो थिएन । यसकारण म दैनिक रूपमा चलचित्रकै समाचार प्रसारण गर्ने उद्देश्यसहित टिभी फिल्मीमा आवद्ध भएको थिएँ । सुरुमा दैनिक रूपमा चलचित्रका समाचार तयार पार्न निकै चुनौती थियो । तर, चुनौतीभित्र अवसर खोजी गर्ने स्वभावका कारण हामीले निकै छोटो समयमा फिल्मी समाचारलाई स्थापित गर्न सफल भयौं । सुरुमा नेपाली भाषामा दैनिक ८ बुलेटिन प्रसारण गरिएको फिल्मी समाचार अहिले नेपाली र अंग्रेजी गरी दैनिक १२ बुलेटिन प्रसारण हुन्छ । अहिले त यसलाई अरूले पनि अनुसरण गरेका छन् । यसरी फिल्म समाचारको ट्रेन्ड सेटिङ गर्न सकेकोमा मलाई आज गर्व लाग्छ ।
यो अभियानमा चुनौतीहरू पनि त्यतिकै थियो होला नि ?
पक्कै थिए, त्यो समय हामीले नयाँ प्रयोग गरेका थियौं । जसका कारण धेरैले फिल्मी समाचार स्थापित हुन्छ भन्ने मै आशंका गरेका थिए । स्याटेलाइट टेलिभिजनमा दैनिक चलचित्रको समाचार चुनौतीपूर्ण थियो नै । केहीले केही महिनामा यो रोकिन्छ पनि भनेका थिए । हाम्रो यो अभियानले चलचित्रकर्मी तथा सेलिब्रेटी निकै खुसी थिए । दर्शकले पनि आफ्ना फेवरेट सेलिब्रेटीको गतिविधि अनि विचारहरू दैनिक थाहा पाउन थालेपछि यसलाई रुचाइदिनु भयो । निकै छोटो समयमा फिल्मी समाचार निकै लोकप्रिय भयो । अन्य कतिपय सञ्चार माध्यमले त फिल्मी समाचारलाई नै स्रोत बनाएर समाचार तयार पारेको सम्म भेटियो । केही समयमा नै सुरुमा हतोत्साहित गर्न खोज्ने नै ठूलो प्रशंसक पनि बने । फिल्मी समाचारमा आफ्ना गतिविधि समावेश हुनुलाई चलचित्रकर्मीले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय मान्न थाले । यसैले चुनौतिका पहाड चिरेरअन्तत हामी नेपालमा चलचित्र समाचारलाई दैनिक बुलेटिनका रूपमा नियमित प्रस्तुत गर्ने ट्रेन्ड सेटरका रूपमा स्थापित भएका छौं ।
बिगत डेढ वर्षदेखि जारी कोरोना संक्रमण महामारीका कारण नेपाली चलचित्र उद्योग ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा तपार्इंहरूले चलचित्र समाचार कसरी बनाइरहनुभएको छ त ?
जहाँ संकट हुन्छ, त्यहाँ समाचार पनि हुन्छ । नेपाली चलचित्र उद्योग अहिले संकटमा छ । त्यो नै समाचार हो । हामीले कोरोना सँक्रमणको समयकालमा कोरोनाका कारण चलचित्र उद्योग, चलचित्रकर्मी, चलचित्र प्राविधिक, सेलिब्रेटीहरू, चलचित्रका निर्माता, हलवालाहरूको समस्यालाई नियमित उठान गर्दै आएका छौं । पारित भएर पनि वर्षौ देखि लागू हुन नसकेको राष्ट्रिय चलचित्र नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा निरन्तर समाचार बनाएका छौं । चलचित्रको स्वरूप र सिनेम्याटिक ल्यावङ्वेजका बारेमा चलचित्र बनाएका छौं । सेलिब्रेटी धेरैको प्रेरणा हुन् । यसर्थ, हामीले आमदर्शकलाई कोरोनासँग लड्न मनोबल प्रदान गर्नेगरी सेलिब्रेटीका बिचारहरू पनि समाचारमा समेटेका छौं । हाम्रो टिम निकै क्रियटिभ छ । जसको क्रियसनले चलचित्रका गतिविधि ठप्प भए पनि फिल्मी समाचारका लागि कन्टेनको अभाव भएन । यही समयमा हामीले टेलिभिजनलाई एचडी क्वालिटीमा अपडेट गर्ने तयारी गरिसकेका छौं । दर्शकले अझ स्तरीय क्वालिटीमा टिभीको प्रसारण हेर्न सकून भनेर अबका केही दिनमा नै हामी एचडी क्वालिटीमा अपग्रेड हुनेछौं । यस्तै एचडी क्वालिटीमा अपग्रेड भएसँगै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका केही रियालिटी सोहरू पनि प्रसारणको तयारी गरेका छौं ।
अन्त्यमा, नेपाली चलचित्र उद्योग र चलचित्र पत्रकारिताको भविष्य अब कस्तो देख्नुभएको छ ?
अवश्य सुखद छ । गत वर्ष पनि कोरोनाको महामारि कम भए लगत्तै चलचित्रका गतिबिधी सञ्चालनमा आएका थिए । अहिले त झन् सरकारले अबको एक वर्षभित्र सबैलाई कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको छ । भ्याक्सिनले पक्कै पनि मनोवल बढाउछ । यसअर्थ फेरी पनि चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुनेछ । जनजीवन सामान्य भएपछि दर्शक मनोरञ्जनमा फर्कने छन् । फिल्म हेर्न सिनेमा हल जानेछन् । चलचित्र पत्रकारिता पनि पुनः जुर्मुराउने छ । अहिलेभन्दा अझ फस्टाउनेछ । मैले त चलचित्र पत्रकारिताको भविष्य उज्ज्वल देखेको छु ।
विष्णुप्रसाद सुबेदी -
कोरोना निको भएको कति समयसम्म ढुक्क ? यस्तो भन्छ अनुुसन्धान